Ogaden News Agency (ONA) – Warbixinadii weerarada Ramadaanka ay CWXO ku qaadaeen cadawga
Warbixinadii weerarada Ramadaanka ay CWXO ku qaadaeen cadawga
Posted by ONA Admin	/ July 24, 2013
Wararka naga soo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo dhowr ah oo ay N/hurayaasha CWXO ku cibaadaysteen bisha barakaysan ee Ramadaanka. Dagaaladii ugu danbeeyay ayaa waxay u dhaceen sidan;
3/7/13 goorashilin oo damada Baabili katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa laga dhaawacay.
9/7/13 Qudhacwitir oo dagmada Danood katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh.
13/7/13 dhabarooble oo dagmada Marsin ee gobolka qoraxay katirsan waxaa ciidanka cadawga lagaga gubay 1 baabuur oo ay islabasbeeleen isaga iyo wixii saaraabo.
13/7/13 gooroshilin oo Dudumocadka katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa laga dhaawacay.
14/7/13 Karinbarkhadle oo dagmada Sagag katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga gubay 1 baabuur oo kuwa ciidanka ah.
14/7/13 Malablay oo dagmada Gunagado katirsan waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin laga haynin.
15/7/13 isla Marsin oo dagmada Galaalshe katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
16/7/13 Kalaalka oo Dudumocadka katirsan waxaa ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare aan faahfaahin lagahaynin.
16/7/13 Marsin oo dagmada Galaalshe waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 9 askari tiro kalana waa lagaga dhaawacay.
18/7/13 Cawarkeen oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka jarar waxaa ciidanka wayaanaha lagugaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
18/7/13 Banbaas oo dagmada Baabili katirsan waxaa ciidanka gumaysiga loogu gaystay khasaare naf iyo maalba leh.
19/7/13 Waafdhuug oo dagamada Wardheer ee xarunta gobolka Doollo katirsan dagaal kulul oo ku dhaxmaray CWXO iyo gumaysiga Itboobiya waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 9 askari waxayna ciidanka JWXO lawareegeen guud ahaa xeradii ciidanka gumaysiga iyagoo halkaasna ka qaatay hub iyo saanad farabadan.
19/7/13 Labiga booskaleh oo tuulada Waafdhuug udhaw kamiin ay CWXO kaxadheen waxaa ciidanka wayaanaha loogu gaystay khasaare aan faah-faahin lagahaynin.
19/7/13 Uubataale oo u dhaxeeya Waafdhuug iyo Wardheer kamiin ay CWXO u xidheen ciidan gurmad ah oo uu leeyahay gumaysigu waxaana halkaas lagu gubay 1 baabuur oo kuwa gumaysiga ah waxaana waxaa dadka halkaas kudhintay gudoomiyihii gobolka Doollo oo markii hore dhaawac halis ah soogaadhay iyo godoomiyihii waxay ugu yeedhaan nabadgaliyada.